काठमाडौं उपत्यकाकामा लकडाउन खुकुलो, सर्वसाधारण बाहिर निस्किन थाले ! – Online Nepal
काठमाडौं उपत्यकाकामा लकडाउन खुकुलो, सर्वसाधारण बाहिर निस्किन थाले !
June 9, 2020 183
जारी बन्दाबन्दीकै बीच काठमाडौं उपत्यकाका मुख्य सडकमा विगत तीन दिनदेखि सवारी साधनको चाप बढेको छ ।
लामो समय लकडाउन हुँदा जनजीवन सँगसँगै आर्थिक जीवन समेत प्रभावित हुन थालेपछि मानिसहरु काममा निस्कन थालेका कारण सडकमा सवारी साधनको चाप बढेको हो ।
एशोसिएसनका अुनसार आइतबारदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा पेट्रोलको खपतमा ३० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने देशैभरमा पेट्रोलियम पदार्थको खपतमा ३३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
नयाँ रिफ्युलर थप
नेपाल आयल निगमले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हवाई इन्धन भर्न २७ हजार लिटर क्षमताका चार नयाँ रिफ्युलर (हवाईजहाजमा इन्धन भर्ने ट्याङ्कर) थप गरेको छ । नयाँ ल्याइएको दुई रिफ्युलर सोमबार भैरहवा भन्सार कार्यालयमा जाँचपास भएको निगमले जनाएको छ । नयाँ खरिद गरिएको चार रिफ्युलरमध्येमा दुई रिफ्युलर बन्दाबन्दीअघि नै ल्याइएको थियो ।
Prevनेपालकै लागि परिवर्तन गरेर गुगलले ल्यायो भारतमा हलचल, देखाइदियो बास्तविक भूगोल
Nextसार्वजनिक यातायात सञ्चालन हुँदै
चर्चित रेस्लर तथा हलिउड अभिनेता ‘द रक’ र उनको पूरै परिवारलाइ कोरोनाभाइरस संक्रमण
बहराइनमा पनि एकै दिन देखियो २७ नेपालीमा कोरोना संक्रमण